मैले पाल्पा छोड्न ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ : सांसद राना – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मैले पाल्पा छोड्न ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ : सांसद राना
मैले पाल्पा छोड्न ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ : सांसद राना
काठमाडौं। सत्तारुढ नेकपाको हिजो बसेको सचिवालयको बैठमा बामदेव लाइ प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ । जसका का पाल्पा क्षेत्र न १ का साम्सद दल बहादुर रानालाइ छोडाएर गौतमलाइ चुनाव मार्फत प्रतिनिधि सभामा ल्याउने खबर बाहिरीए पछी नेकपा नेता रानाले ओलीले राजिनामा दिए मात्र आफुले वामदेवको लागी खाली बनाइदिने बताएकाछन ।
उनले आफ्नो धारणा संचारमाध्यम मार्फत सार्हगरेका छन उनको भनाइ यस्तो रहेको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले मैले छोड्नुपर्छ भने अब वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाऔँ भनेको सुनेको हो । तर शनिबार फेरि उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार बनाएर ल्याउने भन्ने निर्णय आयो । त्यो निर्णयमा त कहीँ पनि प्रधानमन्त्री बनाउन भनिएको पनि छैन । पाल्पाबाट उठाउने पनि भनिएको छैन । उपयुक्त समयमा भनिएको छ । त्यो उपयुक्त समय भनेको कहिले हो थाहा छैन ।
त्यसबारेमा च्याप्टर ओपन हुनै बाँकी छ । यदि पार्टीबाट प्रस्ताव नै आयो भने पनि त्यसका लागि लामो प्रक्रिया हुन्छ । एउटा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएको जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा जनताले दिएको मत, मतदाता, उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेको पार्टी कमिटीहरुको रायहरुलाई ख्यालै नगरी आइसकेपछि मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर निर्णयमा जाने कुरो कुनै पनि उम्मेदवारका लागि उपयुक्त हुँदैन ।
त्यसैले पहिलो कुरा त्यो खालको निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि फेरि केन्द्रमा के व्युँताउनुपर्छ भने ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मैले अब राजीनामा दिन्छु, छिटोभन्दा छिटो बाटो खोलम् भनेर नयाँ प्रस्ताव आउनुपर्छ । त्यस्तो गर्दा म पछि हुने वामदेव गौतम नै हो भनेर पनि गर्नुपर्यो ।’ होइन भने त्यहाँभित्र केही षड्यन्त्र होला । किनभने यो प्रसङ्ग आउनुअघि मसँग नेकपाका कुनैपनि नेताहरुले सोध्नु भएको वा छलफल गर्नुभएको छैन । सबै कुरा प्रष्ट भयो भने छाड्न नसकिने कुरा पनि होइन ।
तर यस्तो विषय उठेकै थिएन । वामदेवजीले प्रधानमन्त्री हुन चाहेको भन्ने बेलाबेलामा सुनिएका हुन् । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भनेर प्रसङ्ग आएको भन्ने सुनेको हो । त्यसैमा अघिल्लो सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मैले छोड्नुपर्छ भने फलानालाई गराऊ भनेर प्रस्ताव गरेको भन्ने पनि सुनियो ।
तर शनिबारको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सभामा उपयुक्त समयमा उपयुक्त ठाउँमा भनेको छ । त्यो उपयुक्त समय त कहिले हो कहिले ? त्यसको त कुनै ठेगान नै छैन । ठेगान नै नभएको विषयमा एकैचोटि पाल्पालाई जाँचेर आउँदाखेरी त्यो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले आएको छ भन्ने मलाई लागेर घोर आपत्तिजनक छ भनेको छु । यसमा षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई कताकता लागेको छ । त्यसकारण यस्तो निर्णय हुनुभन्दा पहिला त मलाई भन्नुपर्यो नि । मैले किन छाड्ने ? हामी १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पाल्पाको १ नम्बर क्षेत्रको दलबहादुर रानाले नै किन राजीनामा गर्ने ? त्यो कुरा पार्टीले पहिला पुष्टि गर्नुपर्यो, तर्क दिनुपर्यो । त्यो अवस्थामा सबै चिज मिलेर आउँदाखेरि के गर्छु भन्ने कुरा भोलिको कुरा हो । त्यसरी आउँछ आउँदैन के कसो हुन्छ बेग्लै कुरा हो । तर अहिले बेप्रसङ्गमा यो कुरा गर्दाखेरि पार्टीलाई नमिलोस् भनेर अचानक मिल्दाखेरी त्यसले केही भय भयो होला ।
अथवा हिजो वामदेव गौतम, अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपालहरुको टिममा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको हो । तर अहिले उहाँले प्रधानमन्त्रीको विचारमा सहमति जनाएपछि कताकता मन दुखाएर यिनलाई अझै फाल्नुपर्छ, भकुण्डो बनाउनुपर्छ, ठेल्नुपर्छ भनेर पो यो प्रसङ्ग ल्याएको हो कि ? अथवा नमिलाउने र बिगार्ने कतिपय तत्वहरु हुन्छ ।
नेकपा एमाले २०५४ सालमा विभाजन भयो, २०५८ सालमा मिल्यो । हामी एमाले विभाजनका बेलामा वामदेव गौतमसँग थियौँ । तर अहिले पार्टी एकता भएको पनि २०, २१ वर्ष भइसक्यो । तर अझै पनि वामदेव गौतमलाई उठाउन दलबहादुर रानाले छोड्नुपर्ने भनेर त्यो कुरा ल्याएको हो भने इतिहासलाई कोट्याएर, घाउ गराएर मान्छेलाई अगाडि जान नदिनेखालको षड्यन्त्र हुनसक्छ ।
भूमि अतिक्र,मणको बि,रोधमा खुकुरी उदाउँदै महिला नेतृले दिईन भारतलाई यस्तो चेता,वनी (भिडियो)